Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FCTA si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags FCTA
FCTA na-eme atụmatụ iwepu ụlọ klọb n'abalị site na ebe obibi iji gbochie mmetọ mmụba
Onye nchịkọta nke Council Management Council (AMMC), Umar Shuaibu, kwuru na a na-ahazi kọmitii ka ha wepụ lounges na klọb na ebe obibi iji gbochie nsogbu egwu mmetọ na mpaghara.
Ndị nwe ụlọ akwụkwọ nwere nkwenye imegide ọtụtụ ụtụ isi
Onye isi nke National Association of Proprietors of Schools Private (NAPPS), FCT Chapter, Hajiya Samira Jibir, kwuru na otu a ga - eguzogide ọtụtụ ụtụ isi na ndị nwe ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ.
Kema Chikwe: Naijiria na-akwụ ụgwọ ọnụ maka ọrụ ụmụ nwanyị
Onye isi oru Minista nke ozo Dr Kema Chikwe, na Sunday gbara ndi nwanyi Naijiria ume ka ha mee ka ogbako mba di iche iche tinye Bill n'ime mmekorita nwoke.
Senator Ekweremadu: Anyị agbapụtala nwanyị
Ụlọikpe ahụ ekwenyela na nnata nke nwanyị a zọpụtara, bụ nke ndị uweojii natara ma laghachi.
Ndị bi na Southern Kaduna na-achọ N4 ijeri akwụ ụgwọ n'aka gọọmentị etiti
Ndị e merụrụ ahụ na 2011 na Southern Kaduna arịọla ka gọọmentị Federal kwụọ ụgwọ N4 ijeri akwụ ụgwọ maka ha.
Mahadum nke Maiduguri na-edebanye aha ha elu n'agbanyeghị na Boko Haram insurgency - VC
Onye isi ulo akwukwo nke University of Maiduguri, Abubakar Njodi kwuru na umu akwukwo noo nke 36,000 na-abanye n'ime ulo akwukwo na nso nso a n'agbanyeghi agha Boko Haram na-emetuta steeti.
Alliance maka ochichi onye kwuo uche ya na-akwusi ndị isi obodo na mba isii
Kọmitii Na-arụ ọrụ nke Mba Alliance maka Democracy na Wednesday kwụsịtụrụ ndị isi obodo na Oyo, Osun, Ogun, Edo, Akwa-Ibom na Anambra.